Home Wararka Xassan Dahir Aweys oo bogaadiyay weerarkii Al shabab iyo dilkii Shiikh C/weli...
Xassan Dahir Aweys oo bogaadiyay weerarkii Al shabab iyo dilkii Shiikh C/weli C. Yare
Somali opposition leader Sheikh Hassan Dahir Aweys who heads the Alliance for the Re-Liberation of Somalia (ARS), addresses his supporters in the capital Mogadishu, April 24, 2009. Aweys said on Friday that there would be no talks with the transitional government until African Union peacekeepers (AMISOM) leave the Horn of Africa nation. REUTERS/Feisal Omar (SOMALIA POLITICS CONFLICT MILITARY)
Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ku jiro xabsi guri ayaa markii ugu horaysay ka hadlay weerarkii lagu dilay Shiikh Cabdiweli Shiikh Cilmi Yare ee ka dahcay magaalada Gaalkacyo,. Shiikh Xassan ayaa bogaadiyey weerarkii ay Al-shabaab ka qaadeen xirta shiikha iyo xaruntiisa
Sheekh Xasan Daahir Aweys oo muuqaal uu soo duubay ku sheegay inuu Al-shabaab ku raacsan yahay talaabadii ay ka qaadeen Shiikh C/weli, waxaana dhanka kale iftiimiyey khaladaadka Al-shabaab ay leeyihiin.
Xassan Dahir Aways ayaa wali u muuqda mida aan ka bixin xeendaabka Kooxda Al Shabaab.
Halkaan ka daawo hadalkiisa:
Previous articlePathways for Peace: Reflections from Somalia
Next articleIs afgaran waaga MW. Farmaajo iyo RW Kheyre oo laga dareemay villa Somalia
Farmaajo oo looga digay in uusan guul u arag sii haynta...
Turkiga oo sameeynaayo soo kabashooyin xoogan !!